Imbali yoMdaniso weHip Hop - Imbali Yedance
Imbali yoMdaniso weHip Hop
Xa kuthelekiswa nezinye iindlela ezininzi zomdaniso, ihip hop inembali emfutshane. Ukuqala kwale fom yomdaniso kubuyela kwiminyaka yama-1960 kunye neye-70, kodwa ke intshukumo kunye nomculo zineengcambu ezithandana kakhulu nexesha.
Imbali yokuqala yoMdaniso weHip Hop
Umdaniso we-hip hop kucingelwa ukuba uqalile ngokusesikweni kwisiXeko saseNew York ngasekupheleni kweminyaka yama-1960 nakwiminyaka yama-70s. Ngeli xesha, abantu abangenalo uqeqesho lomdaniso wobungcali kodwa benemvelo yokuhamba bazisa umdaniso ezitratweni. Ifom yomdaniso yayenzelwe ukuba ithandwe ngokwentsingiselo yeli gama, oko kuthetha ukuba yayiyeyabantu hayi eyokufundela, ukuhamba kwehip hop kwakukhuthazwa zizigqi ezintsonkothileyo kunye nendlela yentshukumo eya ezantsi emhlabeni yokudanisa kwaseAfrika. Umculo kunye nentshukumo zahlangana zenza ubugcisa obutsha. Ngelixa imizila yemidlalo yala maxesha, itephu, ujingi kunye nomdaniso waseAfrika konke kunokufumaneka kwihip hop, le ndlela yokudanisa ikwiklasi yayo xa isiza ekuphuculeni kunye nomda wokhuphiswano.
Imifanekiso yoMdaniso weLimbo
Izixhobo ze studio soMdaniso
Iingcambu ze-hip hop kwi-East Coast zaziwa ngokubanzi, kodwa kukwakho nembali ye-hip hop yase West Coast apho uninzi lwehip hop eyaziwayo iqala khona.
I-East Coast Hip Hop
I-Hip hop ayikhange ikhule kuphela kunxweme oluseMpuma, kodwa amagcisa esiXeko saseNew York aqulunqa isitayile somculo kunye nenkcubeko yomdaniso eyaya kwintsholongwane kumashumi eminyaka ngaphambi kokuba kubekho i-intanethi. Ngelixa kwakungabizwa ngokuba ngumdaniso wehip hop, olu hlobo lobugcisa lwaqala ukukhula xa u-DJ Herc wafudukela eBrooklyn eneminyaka eli-12, kwaye waqala umsebenzi ongacwangciswanga owawuza kumguqula ngokukhawuleza abe ngomnye wee-DJs ezaziwa kakhulu eNew KwiSixeko saseYork.
indlela yokuthengisa iinjana kwi-craigslist
Ukufudukela kwisiXeko saseNew York ukusuka eJamaica, Ukool DJ Herc WayenguDJ wokuqala ukwenza umculo owahlukileyo ngokudlala oomatshini bokurekhoda ababini abanerekhodi efanayo kuzo zombini. Iingoma awayezenzile zazizezinye zezinto ezibalulekileyo ezasisiseko zehip hop; Wongeze icandelo lomdaniso weengoma ukuze abadanisi babonise ukuhamba kwabo ixesha elide, babeka isiseko senkcubeko yokudanisa.
IHip Hop yoNxweme oluseNtshona
Kwi kwinxweme LASENTSHONA , umdaniso wehip hop ubolekwe kwiBronx kodwa wavelisa isimbo sayo. Umculo kaJackson ezintlanu kunye nokusebenza kwayo ngama-60s kunye nee-70s kwakukhuthazo olunye lokurhola. Iintshukumo zeerobhothi zazikhona ngokusekwe kwiinkqubo ezithandwayo zeTV kunye neefilimu malunga nabaphambukeli kunye neerobhothi. Ngelixa i-East Coast b-amakhwenkwe ayekhenkceza ngamandla kwiikhefu zawo, iihip hop hop zase West Coast bezixelisa iimannequins zesebe labo. Bafuna ukuphinda-phinda intshukumo yobomi bokuzenzela, aba vulindlela balandelayo babumba ihip hop kuNxweme oluseNtshona.
I-Boogaloo Sam: Umyili wokuvela, UBoogaloo Sam yaba nefuthe elibalulekileyo kwindaleko yehip hop. Ukufaka igalelo kwimbonakalo yehip hop yoNxweme lwaseNtshona kwangoko ngeminyaka yoo-1970, wayenesiphiwo somculo kunye nentshukumo kwaye wayengumsunguli weqela lomdaniso u-Electric Boogaloo.
UDon Campbellock: Ngelixa igama lakhe lokwenyani yayinguDon Campbell, ukuyilwa kwakhe, ukutshixa, kwaba nefuthe kwigama lakhe. Yaziwa njenge UDon Campbellock , lo mntu ubalulekileyo kumdaniso wehip hop wenza iqela lomdaniso I Lockers, kunye nomdaniso wakhe obalaseleyo wabumba imeko yase West Coast.
IHip Hop yaseMelika
Ngelixa abadanisi behip hop, ukuphuma kunye nokutshixwa koNxweme oluseNtshona kunye nokuqhekeka kwe-East Coast ziindlela ezimbini zomdaniso ezahluke kakhulu, imimandla emibini yommandla ihlala idityaniswa yaze yahlanganiswa yohlobo lwe'hip hop. ' Ngelixa uhlobo lokudanisa luqhubeka nokuvela, abadanisi abaninzi bagcina izitayile zoqobo ezichaphazelekayo kwingingqi nganye, ngelixa abanye amagcisa bezisa hayi kuphela iindlela ezahlukeneyo zomdaniso we-hip hop, kodwa kunye neendlela ezongezelelweyo zokudanisa ezifana nokujinga.
Iminyaka yee-1980 Ukuvela kweHip Hop
Ukuqala kwehip hop yayiyeyentsebenzo, kodwa ingacwangciswanga, inkcubeko yomdaniso. B-amakhwenkwe kunye b-amantombazana (amagama angeniswe ngu-DJ Herc) angamenywa ukuba abonise ukuhamba kwabo ngabanye abantu esitratweni, kwinkundla yebhasikithi, okanye naphi na apho iqela belikhona. Njengoko intshukumo yayiba kumaziko ngakumbi (umzekelo, ukuqhekeza, ukuphuma, kunye nokutshixa), kwaye ngakumbi nangakumbi abadanisi babanjwa kwizingqisho zomculo, indawo yesitrato yatshintshela kwiindawo zokudanisa ezisesikweni. I-choreography iphuhlise intshukumo ebonakalayo, kodwa ubuchule bokuyila kunye nokhuphiswano behip hop bahlala. Ihlala idaniswa njenge 'dabi' okanye ubuso ngobuso kwisangqa sabalandeli abonwabileyo.
mangaphi amakhandlela akwi-menorah
Kwi Ii-1980 kunye nee-90s iiklabhu ezininzi zibonisa ii-DJs zehip hop, ngakumbi kwizixeko ezikhulu, kwaye abadanisi kuwo onke amanqanaba ezakhono baya kubetha kumgangatho wokudanisa. Zombini ukhuphiswano olungekho sesikweni nolusemthethweni luhlala luvela. Ukhuphiswano olungekho sikweni luqale xa abambalwa abadanisi ababalaseleyo baqwalaselwa kumgangatho wokudanisa; abanye abantu bayarhoxa kwaye bavumele iinkokheli ukuba ziyikhuphe. Njengokuba olu khuphiswano lungekho sikweni lwaya lusanda ngokuxhaphakileyo, lwazisa ukhuphiswano lwaba yinxalenye yobusuku kwiiklabhu zehip hop. Nokuba bavele ngokwasemzimbeni okanye babhengezwa kwangethuba, olu khuphiswano lwanceda ihip hop yagcina inkcubeko yedabi esele ikho kwasekuqaleni. Olu hlobo lokhuphiswano lunokubonwa nakwezinye iifom zomdaniso, mhlawumbi ikakhulu kumdaniso wempompo wenkulungwane yama-20.
Ngoku Uyabona 'Em
Zininzi izinto ezintsha kwifom yomdaniso kunzima ukuzigcina. Amagama adumileyo abandakanya uDan Karaty, uBrian Friedman, u-Chucky Klapow, uRobert Hoffman, uMichael Jackson (owamkelwa kwangoko kunye neentshukumo ezingalibalekiyo), u-Comfort Fedoke, u-Witch Boss, u-Soulja Boy, u-Cyrus 'Glitch' Spencer, no-Napoleon no-Tabitha D'umo-choreographer abasebenza njengeNappytabs yeprofayile ephezulu ibonisa njenge Ke ucinga ukuba ungaDanisa kwaye ICirque Du Soleil.
Inkulungwane yama-21 yeHip Hop
Kule mihla, ihip hop yasesitalatweni kungenzeka ukuba ibe liqela le-flash orchestrated, kunye ne-hip hop fusion iphumelele uTony kwiBroadway .
Ukujongana namalungu osapho akholwayo kakhulu
Iingcambu zehip hop zazingacwangciswanga kwaye zazisekwe kwiqela endaweni yabaphulaphuli, kodwa loo nto iguqukile. I-Hip hop inamandla kakhulu, yatsiba ukusuka kumanqwanqwa ukuya kwinqanaba lesithuba seminyaka yee-1990 kwaye iqhubeka nokuqhuba i-turf yokusebenza. Abadanisi behip hop abadumileyo banokuyinyikimisa indawo yeklabhu, kodwa banokuthi bathathe inxaxheba kukhuphiswano lweejaji zokudanisa okanye abaphulaphuli bakamabonwakude belizwe. Umdwebi weengoma UWade Robson wenza umboniso wakhe weTV, Iprojekthi yeWade Robson , ukukhetha italente yomdaniso wehip hop ezayo, ngelixa amaqela omdaniso afana nokwahluka kunye neICONic Boyz bebexakekile bekholisa abaphulaphuli bakamabonwakude ngokuhamba kunye nezitayile zabo.
Ukusukela oko kwafika umculo kumabonakude nakumajelo asekuhlaleni, ihip hop iye yalawula iividiyo zomculo. I-hip hop yenkulungwane yama-21 yingqokelela yeklasikhi yokuqhekeka kwamakhwenkwe, ukuphuma, ukutshixa, ukufundisa kunye nolunye uhlengahlengiso, kunye neefom freestyle ezinje ngehipop yehipat yeemvumi ezinje ngeWitch kunye neFik Shun.
Ipop yaseHip Hop
I-Hip hop inokuba ngumntwana omtsha kwibhlokhi, kodwa yeyayo ibhloko. Abantwana abancinci bayaphuma kwaye bavale kwikhefu labantwana abasaqalayo - kufanelekile, njengoko u-DJ Herc kunye namakhwenkwe akhe babedla ngokwenza weba umbane kwiipali ezikhanyayo kunye nokuseka amaqela abo omdaniso wobumelwane kwizikolo zesikolo iBronx. Ungayiphawula into yokubona iVenice yaseVenice njengoko undwendwela iPazza San Marco kwaye ubambe ihlokondiba elingena phakathi kwe amanzi e-altas . Ngu-Eva woNyaka oMtsha kwi-Times Square, i-back up-up ka-Beyonce, iqela elikhuthazayo kwisikolo sakho samabanga aphakamileyo, esenzeka nge-5-intshi stilettos kwi-Senior Prom. Nikezela nje. Sebenza kwindawo yakho yokwahlulahlula i-pelvic, imiqolo yamagxa akho, kunye nomdlalo wakho wokungathathi-mabanjwa. Awunakho ukwenza i-waltz indlela yakho yokuphuma kule. Kodwa ungaphosa amanqindi, ukhuphe isifuba sakho, inyathelo elikhawulezayo kunye nokuhomba kwiziteki zakho, kwaye ukongeza nje ihip hop kwireferensi yeqela lakho. Uyayazi ukuba yenziwa njani ngoku-ke yehla kwaye wenze imbali yakho yomdaniso.
Amantombazana Akuqhelekileyo Clothing Ubucwebe Boxes Nokugcina Ihalloween Makeup Techniques Imibono Yebaby Slides Mens Fashion Tips
ezona ndawo zokuthambisa iinwele zase-afrika
Ngaba ilibra kunye nomhlaza ziyavana
Imibuzo esemngciphekweni kunye neempendulo kubantwana
ii-ounces zewayini kwibhotile
Ungasusa njani iigrisi kwiipani
isepha eluhlaza yeetattoos eWalmart